İmamoğlu'ndan Gar İhalesi İçin İkinci Tepki: ’İstanbul Adına Çok Öfkeliyim!’ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Imamoglu မှတင်ဒါဘူတာသို့ဒုတိယတုံ့ပြန်မှု - 'ငါ Istanbul ကိုယ်စားအရမ်းဒေါသထွက်မိပါတယ်'
19 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
BBB ဥက္ကEk္ဌ Ekrem amomamoğluသည်Yenikapıရှိ Eurasian Show နှင့် Art Centre တွင်ကျင်းပခဲ့သော“ Mukhtars အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲdüzenlen” တွင်နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့၏ 961 ခေါင်းဆောင်အားအတူတကွစုရုံးခဲ့သည်။
တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည့် Haydarpasa နှင့် Sirkeci ဘူတာများ၏ထုတ်လွှင့်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည့် Imamoglu ကသူသည်အစ္စတန်ဘူလ်ကိုယ်စားအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒီလိုနည်းနဲ့ပြည်သူ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့၊ ဒီကျင့်ဝတ်မရှိတဲ့သူတွေကဒီပြည်နယ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဒီနေ့လူတစ်ယောက်ယောက်ဆီယူသွားမယ်၊ မနက်ဖြန်မှာတခြားအရာတွေကိုဆွဲထုတ်သွားမှာပါ။ thism Imamoglu က“ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပန်နေရတဲ့သတင်းတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ၊ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊
Istanbul Metropolitan မြူနီစီပယ် (IMM) က "2020-2024 မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း" ၏နယ်ပယ်အတွင်းရှိ Yenikapi ရှိ Eurasia Show နှင့် Art Centre တွင်“ Mukhtars အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်းမတိုင်မီ IMM ဥက္ကrem္ဌ Ekrem amomamoğluသည် 13 အောက်တိုဘာခေါင်းဆောင်များနေ့တွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် AGSM ၏ရုံးခန်း၌ 19 ၏ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး စုစုပေါင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ Imamoglu, muhtars, "ငါနေကောင်းလား" ဆိုတဲ့မေးခွန်းက "ငါကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်" ငါကလူတိုင်းကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ "ကျနော်တို့ကငါတို့ mukhtars ချစ်ကြတယ်။ ukm amomamoğluက“ ဒီလှပတဲ့နေ့မှာမင်းကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီမိုကရေစီရုံး၏ပထမ ဦး ဆုံးအချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်၊ ပထမအချက်ဖြစ်သည့်ဤရုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလို။ တိုးတက်အောင်လုပ်လိုကြသည်။ သင်၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည်ဤအပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အစဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ယူချင်တယ်။ သင်၏အတွေးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောနေရာတစ်ခုကိုဖုံးလွှမ်းသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည့်အရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသင်သံသယမဖြစ်နိူင်ပါ။
အစ္စတန်ဘူလ်သည်ကြီးမားသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ဟုမိုမာဂူကပြောကြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ဝေမျှလေလေကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုလွယ်ကူလေဖြစ်သည်။ ဤပံ့ပိုးပေးသောစနစ်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ပြproblemsနာများစွာကိုအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီမိုကရေစီဟုခေါ်သည့်အယူအဆသည်အလွန်လှပပြီးတန်ဖိုးရှိသည်။ ငါဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောကျတယ် - ဒီမိုကရေစီဆိုတာဆိုလိုတာကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ရွေးချယ်မှုမပြုသောသူတို့၏တည်ရှိမှုအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ငါမဲထည့်ပြီးပြီ။ ငါရွေးလိုက်တဲ့လူကိုရွေးလိုက်တယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဖက်တွင်၎င်းသည်နိုင်ငံသားအားတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးများခံစားစေသည့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတော့မင်းကယန္တရားရဲ့အစိုင်အခဲအစမှာရပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလုပ်များစွာရှိသည်။ ငါတို့မူကား၊
“ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၏သဘာပတိသည်များစွာဖြစ်လိမ့်မည်” \_ t
Imamoglu က“ IMM ကဒီနေ့ပထမဆုံးအကြိမ် Kent City Council ကိုတည်ထောင်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကျနော်တို့မြို့ကောင်စီဖွဲ့စည်းခဲ့သည်, ဒီအဖိုးတန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်နှင့်ချီသောလူပေါင်းများစွာကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သောစေတနာ့ဝန်ထမ်းစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေသည်။ ဒါဟာဥပဒေ၌၎င်း၏နေရာရှိပါတယ်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများထံမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်ယန္တရားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 'မြို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ' ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေသည်။ သင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှအကျိုးလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသင့်ကိုအားသာချက်ယူလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယပစ်မှတ်မှာရပ်ကွက်ကောင်စီများဖြစ်သည်။ ဒီရပ်ကွက်ကောင်စီဥက္ကchairman္ဌသည်မယိမ်းယိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာထိုအသင်းတော်များကိုရပ်ကွက်များ၌တည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုငါတို့ရွေးကောက်ပွဲကြေငြာချက်မှာရှင်းပြတယ်။
“ ၀ န်ကြီးဌာနကသူတို့ကိုတင်ဒါမပါဘဲ IMM ကိုပေးအပ်ခဲ့”
ထို့နောက်amomamoğluသည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပသည့်ခန်းမသို့ သွား၍ Istanbul ရှိ 961 ရပ်ကွက်ရှိခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Murat Şeker၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ရလဒ်ကိုကြေငြာပြီးနောက်မိုက်ကရိုဖုန်းကိုယူခဲ့သောamomamoğluကအသစ်သောကာလ၌သူတို့လုပ်မည့်အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ သူကဒီမိုကရေစီစနစ်၏အခြေခံအချက်များကိုbaşlangıçအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Imamoglu သည်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Haydarpasa နှင့် Sirkeci ဘူတာများတွင်အရှုပ်တော်ပုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘူတာနှစ်ခုလုံးသည်အစ္စတန်ဘူလ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသူများအတွက်သင်္ကေတဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပြီးğmamoğluတင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖြစ်ရပ်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနသည်အမြတ်အစွန်းမရဘဲလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း Imamoglu မှပြောကြားခဲ့သည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်တင်ဒါမပါဘဲအခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းသို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်၎င်းကို IMM သို့ပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအီစတန်ဘူလ်တွင်ရာနှင့်ချီ။ ရှိသည်။ ငါပြောတာကမင်းကမှားနေတာလား ငါတို့ဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာများကိုအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူတို့အားဝေငှခြင်း။ သို့သော်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်; "မြို့တော်ကဒီတင်ဒါဝင်လို့မရဘူး" ဟုသူကပြောသည်။ သူဘာလို့မလုပ်နိုင်တာလဲ အဖြေမရှိ၊ ခွင့်မပြုကြသည်! ငါကသူ့လှုံ့ဆျောမှုဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူ့ကိုမေးတယ်။ ဒီလှုံ့ဆျောမှုအတှကျသငျ့ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုကဘာလဲ။ သင် IMM ဟုခေါ်သည်မှာဤမြို့၏ 16 သန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီရှင်းပြချက်ကိုလိုအပ်တဲ့စည်းကြပ်မှုရှိပါသလား။
ဒါလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူး” \_ t
IMM ၏ဖိုင်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း Kendilerine ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီနှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို Imamoglu မှပြောကြားခဲ့သည်။ Imamoglu က၎င်းတို့အား 17.00 စီတန်းများမှလာသည့်ဖက်စ်ဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး၎င်းတို့အားတင်ဒါမှဖယ်ထုတ်ပြီး“ သူတို့မျက်လုံးဘယ်မှာလဲ၊ ဘယ်မှာမင်းမျက်စိလဲ။ မင်းပါးကဘယ်မှာလဲ ဒါဟာဝမ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေပါ ဒီတစ်ခါလည်းငါသူ့ကိုလိမ္မာကိုပြောသည်; ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ ငါအစ္စတန်ဘူလ်ကိုယ်စားအမျက်ထွက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစရာ - လွန်ခဲ့သောရက်များက 15 ကအရာရာတိုင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ သို့သော် 15 ၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ ဤသည်မှာဤမြို့ရှိ 16 လူ ဦး ရေနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ 16 လူ ဦး ရေရဲ့အခွင့်အရေးကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ဒီကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်။ ဒီအခန်းထဲရှိသူများအပါအ ၀ င်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သူမဆိုတနင်္လာနေ့တွင်သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်ရာဇ ၀ တ်မှုတိုင်ကြားလိမ့်မည်။ IMM သည်ဤမြို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သောဤမြို့၏ယုံကြည်မှု၊ သမိုင်း၊ သဘာဝနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ Istanbul ၏မြူနီစီပယ်ကပိုင်ဆိုင်သည်, သူကပြောသည်။
N ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကဘာလဲ။ ”
"ဒီလှုံ့ဆျောမှုကဘာလဲ? ဘယ်သူ့အတွက်ဘာပေးမှာလဲ” ဟု ထပ်မံ၍ အီမာနိုလူကထပ်မံမေးမြန်းသည် - ဤနည်းအားဖြင့်ပြည်သူ့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပုံစံကိုမသိသောသူများသည်ဤကျင့်ဝတ်တရားကိုသယ်ဆောင်ကြခြင်းမရှိဘဲ၊ ယနေ့နိုင်ငံတော်ပိုင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတစ်စုံတစ် ဦး ထံသို့ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ငါတို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှုတ်သည်လုံးလုံးလျားလျားမကျရောက်ပါ။ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ အတူတကွမှု၊ တရားမျှတမှု၊ အခွင့်အရေး၊ ဥပဒေ၊ စားခွင့်၊ ဤနိုင်ငံ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်မထားပါနှင့်။ ဤမြို့နှင့်နိုင်ငံ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာ၊ ဤနိုင်ငံသည်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခွင့်၊ သတင်းဆိုးများကိုမကြားရ၊ နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပူပန်နေသောသတင်းနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒီလိုဝန်းကျင်မျိုးမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊
Arnavutköyရှိ Yunus Emre ခရိုင်၏အဓိကအဆောက်အအုံဖြစ်သည့် Fikri Temizel က Imamoglu အားသူ၏ဖခင်၏ကော်ဇောပေါ်သို့ယက်ပြီးဓာတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ amomamoğlu, Esenler Kazım Karabekir ခရိုင် Mukhtar Muharrem Polat,“ အငယ်ဆုံးအထီး muhtar”, Zeytinburnu ကြိုးမဲ့အိမ်နီးချင်း Mukhtar Edanur Menteş“ အငယ်ဆုံးအမျိုးသမီး mukhtar, Adalar Nizam အိမ်နီးချင်း Mukhtar Sherif Ali Coskuner“ အသက်အကြီးဆုံးအထီး muhtar” Erik အသက်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီး muhtar သည်Feriköy Neighborhood ၏မြို့တော်ဝန် Sevim Meriç, erkek အထီး muhtar,eအရှည်ဆုံးသက်တမ်းကSarıyer Tarabya Neighborhood ၏ muhtar Hasan Refet Üstün; ပြားနှင့်ဆု။ amomamoğluသည်မော်ကွန်းပြားများနှင့်ဆုများကို Istanbul ရှိမသန်စွမ်းသူများ၏ဥက္ကmen္ဌများဖြစ်ကြသောÜsküdarİcadiyeခရိုင်ခေါင်းဆောင် Mehmet Faruk Güllüနှင့်BağcılarYenigünခရိုင်အကြီးအကဲBünyaminÇiftçi။
İmamoğlu: 'Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu İstanbul'un…
Sosyal Kooperatif Treni İkinci Seferine Sirkeci…
Ekrem İmamoğluထံမှ Marmaray ပြောင်းရွှေ့
Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odasından bedava…
Alanya ပိုမိုနီးစပ်အိပ်မက်နှင်းလျှောစီး LIFT မှခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်း